Bembea House -Shela Lamu - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Cecilia
Indlu ye-Bembea enezitezi ezi-4 ibonisa ukukhanga okuthakazelisayo kwezakhiwo zesiSwahili ezixutshwe nefenisha kagesi kanye nokuthinta komuntu siqu kwesitayela esihle kakhulu nokunethezeka. Itholakala emaphethelweni edolobhana elihle i-Shela, eduze kwezindunduma ezinqamula indawo ende ye-Shela Beach. Itholakala kuphela izinyathelo ezimbalwa ukusuka ePeponi Hotel edumile
I-Bembea house yindlu yokuziphekela.
Yikhaya elikude nekhaya.
Indlu ilala abantu ababili kuya kwaba-4 emakamelweni amabili okulala. Esitezi sesibili kunamakamelo okulala angu-2 afakwe imibhede enezithombe ezine, amanetha omiyane, amafeni osilingi namatafula okugqoka. Izindlu zokugezela ze-en-suite zinamashawa amanzi ashisayo, amanzi ashisayo ashiswa ngamaphaneli elanga.
Ihholo lokungena lihlotshiswe ngamagobolondo olwandle ezindaweni ezinhle kanye namabhentshi amatshe amathathu amakhulu alungele ukuhlala nokuphumula. Izitebhisi ziholela ekhishini elihlome ngokuphelele. Ikhishi linendawo yokudlela lapho abangani nomndeni wakho bengakwazi ukuhlala futhi badle. Ngamafasitela ekhishini ungakwazi ukubuka izinyoni ezihlahleni zesundu futhi ujabulele umbono wezindunduma zesihlabathi.
Isitezi sesithathu sinendawo yokudlela evulekile kanye negumbi lokuhlala eliseduze.
Okokugcina, sinophahla oluhle kakhulu olunombono we-Indian Ocean kanye nesigodi saseShela.
Ngenkathi uziphumulele endaweni yokuphumula ye-khansa noma ushiswa ilanga emibhedeni yelanga enethezekile, ungakwazi ukuzwa umoya opholile ovela ezindundumeni.
4.94 · 103 okushiwo abanye
Bobabili u-Johnson no-Sammy bazokunakekela wena nendlu futhi bangakwenzela izitsha ezimangalisayo kakhulu.
Bangakwazi futhi ukuhlela uhambo lwe-Dhow ne-Bongo noma i-Deep sea yokudoba nokaputeni abanolwazi.